Okokuqala, ake baqonde ukuthi yini ndaba bese uzama ukuthi ngakho wacasula owesifazane phambi nemvelo. Okokuqala, njalo ngenyanga - lena ukuhlanzwa zemvelo kwesibeletho. I epithelium ibuyekeziwe futhi ingane kayibuhlungu sikhule endaweni enjalo. Kodwa kwenzeka ukuthi igazi idlula imithetho ukwabiwa, futhi kwenzeka ngasiphi yobudala - kusukela ekuqaleni zokwehlukaniswa nangemva ukuqedwa kwabo (menopause). Futhi umbuzo main kulezi zimo: ezinye ejenti hemostatic esesikhathini ingasetshenziswa.
Ukuze sikhethe kahle, udinga ukwazi ngokuqondile ukuthi yini ebangele lesizalo ukopha. Ngokuvamile kuba ukuphazamiseka kwama-hormone ezenzeka ezikhiqiza amaqanda. Phela, nabo basuke banesibopho isimo kanye nenani lama-hormone zesifazane. Yingakho lesizalo hemostatic izidakamizwa ngokuvamile aqukethe ezinye hormone ukhiye. Yiqiniso, ukuthi ngaphandle luhlolo ukuba ayichaze isakhiwo oyifunayo akukwazi.
Lesizalo ukopha kungadala ezinye izifo: polycystic amaqanda, fibroids noma lesizalo fibroids , njll Kulezi zimo, kubaluleke hhayi kuphela ukucacisa ejenti hemostatic ezifanele esesikhathini, kodwa futhi ukubhekana nesifo ecashile. Phela, ukumisa ukopha kanye - akusho ukuthi luvimbele ukuphinda.
Uma uneminye opha nezinye izimbangela kanye nesimo hormone ongaxhumene, kuyafaneleka ukusebenzisa izidakamizwa lesizalo hemostatic ukuthi constrict imithambo yegazi kanye ukwandisa ezingeni igazi ekunqandeni. izidakamizwa ezinjalo ingasetshenziswa Imali yesikhathi esisodwa, kodwa hhayi ngendlela ehlelekile, njengoba bona kungabangela umonakalo empilweni yomuntu, ngokushintsha nemingcele enza esikhathini eside kakhulu.
Kodwa kukhona izimo lapho izidakamizwa hemostatic at nyangazonke contraindicated ngenxa komzimba nezinto iyiphi enye yezingxenye noma ungezwani. Khona-ke they resort imithi yendabuko. Ngokwemvelo, ngendlela ukulinganisela hormone akuzona, futhi unciphise imithambo yegazi kuyinto ngempela ngempela. Omkhulu ngalezi zinhloso a decoction of emagxolweni Viburnum, infusions sembabazane kanye isithako nomuthi futhi zezinkambi of marigold, nabanye. Nokho kuwufanele ukukhumbula ukuthi kungcono ukuba yokuzithiba, kodwa ngesikhathi ukuze ubone udokotela ukuze usizo kumuntu ofanelekayo.
ejenti Hemostatic at Sharok nyangazonke okwethulwa Ikhemisi kodwa phakathi kwabo kukhona nalena: Dicynonum, Traneksan, Vikasol njll a kuphela onguchwepheshe angakwazi ukubona ukuthi: yini noma cha ukuthatha le mithi, kulokho umthamo kanye ngasiphi isikhathi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi lapho ithola izidakamizwa engalawuliwe okuyinto ukukhuthaza igazi ekunqandeni kanye constrict izitsha, ukuminyana emithambo yegazi kungenzeka. Futhi, lezi imithi contraindicated kulabo kakade uhlushwa thrombosis noma isifo sokuqina kwemithambo yegazi.
jikelele kufanele aphathwe ngokucophelela elashwe hormone. Igcwele nemiphumela ezingalindelekile futhi ephelele iziyaluyalu umzimba. Ngenxa yalokho, ukuwohloka kwempilo, esimweni sengqondo, umsebenzi ezinye izidumbu i-. Yingakho ngaphambi kokuthatha imithi hormone Hemostatic kubaluleke kangaka ukuba bahlolelwe futhi ukunquma ukuthi yini entulekayo amahomoni, okuyizinto ngokweqile. Kungathatha i endocrinology. Basuke uvame ukubizwa ngokuthi amakhabethe amakhabethe ukulawulwa esikhathini. Okubalulekile kule ukuzinza of imijikelezo futhi inani legazi labelwe - a ecacile imbangela. kulokhu kuphela kungaba ngesikhathi ukuvimbela i-anemiya.
Isifo sokulahlekelwa yigazi - isifo ukuthi uvame ukubizwa ngokuthi igazi. Siqukethe e esincane kwamangqamuzana egazi abomvu ukuthi kubalulekile kuzo zonke izinhlaka wabantu usebenze kahle. Elikhulu ukopha (kwabesifazane esesikhathini ezingaphezu kuka-80 ml) igcwele ukubukeka igazi. Izimpawu zokuqala: nokulahlekelwa ukwazi, ukungabi namandla, ukungakwazi ukugxilisa ingqondo, omiswe bese ushintsha umbala izindebe, ikhanda, njll
Ngifisa ukuba ube nempilo futhi lesi sifo odokotela abaqeqeshiwe futhi enozwela!
Kanjani ukungena ngokufanelekile TAMPON GIRL ongenalwazi